147 Jir Ka Sheekeeyey Cuntooyinka Caadada U Ahaa Oo Laga Yaabo In Ay Yihiin Sirta Cimri Dhererka | Somaliland Today
← Kharash Intee Leeg Ayaa Dawladda Maraykanka Kaga Baxa Dagaalka Ay Kula Jirto Argagixisada Iyo Tirada Dalalka Uu Ka Socdo
DAAWO: Siyaasi Bille Rafle Guleed Oo Beeniyay Warar Laga Baahiyay Oo Sheegay Inuu Taarikh Gubay →
147 Jir Ka Sheekeeyey Cuntooyinka Caadada U Ahaa Oo Laga Yaabo In Ay Yihiin Sirta Cimri Dhererka
(SLT-Riyadh)-Waxaa toddobaadkii hore magaalada Abha ee dalka Sucuudiga ku geeriyooday Sheekh Cali Calamki oo ay ahaa ninka ugu da’da weyn dalka Sucuudiga. Sheekha oo 147 sano jiray ayaa ay dad badani xiiseeyeen in ay wax ka ogaadaan noloshiisii hore iyo in la baadho sirta ku duugan cimrigiisa qarniyo badhka ku dhow.
Haddaba qormo uu Geeska Afrika turjumay ayaa ay shabakadda wararka ee Alcarabiya ku eegtay hab nololeedkii Sheekhan iyo cuntooyinka uu dhaqanka u lahaa, si ay dersi ugu noqdaan dadka dunida maanta oo marka laga tago cimrigooda oo sannadba sannadka ka dambeeya sii yaraanaya ay u dheertahay calaamadaha gabowga iyo cudurrada oo da’ yaraan ku bilaabanaya.
Hab nololeedka Sheekh Cali Calamki
– Waxa uu raaci jiray hab cunto qaadasho oo u gaar ah.
– Waxa uu necbaa, aadna isaga ilaalin jiray baabuur fuulidda, isaga oo doorbidi jiray in uu intii suurtagal ah lugtiisa maalo. Xitaa mar uu soo cimreysanayey waxa uu ka lugeeyey magaaladiisa Abha, waxa aanu lugtii ku tegey magaalada barakaysan ree Makah oo u jirta in ka badan 600 oo kiiloomitir. Waxaa xusid mudan in Abha iyo Makah gaadhiga aad u dheeraynayaa uu u kala socdo 7 iyo badh saacadood.
– Waxa uu dhaqan u lahaa in uu joogto u akhriyo Qur’aanka Kariimka ah.
Cuntooyinkii Sheekh Cali Calamki
– Sheekhu waxa uu cuntada uu cunayo waxa uu kala soo bixi jiray beertiisa, isaga oo ku dadaali jiray in aanu cunin cuntooyinka laga keeno beero ka baxsan dalka.
– Waxa uu cuni jiray cuntada galka leh, sida midhaha ay ka mid yihiin qamandiga, hadhuudhka, heedda iyo hilibka xoolaha ee darayga ah, isaga oo weliba ku dadaali jiray in uu xoolihiisa qasho, si uu u ogaado caafimaadka hilibka uu cunayo.
– Waxa uu aad u isticmaali jiray malabka.
– Waxa uu diidi jiray in uu cuno cuntooyinka xafladaha, ama cuntada qasacadaysan.